MACLUUMAADKA EY WEIMARANER IYO SAWIRRO - EEYAHA
Macluumaadka Ey Weimaraner iyo Sawirro
Gaaban iyo Dhego-yare
Udo the Weimaraner da'da 2 1/2 sano
Weimaraner hagaha eyga
Weimaraner waa eey dhexdhexaad dhexdhexaad ah, isboorti ah, oo shaqeeya. Madaxa dhexdhexaadka ah wuxuu leeyahay joogsi dhexdhexaad ah oo khadka dhexe uu wejiga uga sii dhacayo. Sanku waa cawlan yahay ilkihuna waxay ku kulmaan qaniinyo maqas ah. Indhaha xoogaa ballaadhan ayaa ku yimid hooska iftiin khafiif ah, cawl ama buluug-cawlan. Dhegaha sare waa kuwo dhaadheer oo jilicsan, horay isugu laaban oo hoos u laallaada dhinacyada dhinacyada. Lugaha hore waxay ku toosan yihiin websaydh, cagaha is haysta. Ciddiyaha suulasha waa midab cawlan ama midab leh. Dabada ayaa sida caadiga ah lagu xiraa 1 ½ inji (4 cm) marka eeygu laba maalmood jirsado. Fiiro gaar ah: dabo istaaggu waa sharci darro inta badan Yurub. Waxaa inta badan laga saaraa soo deynta (Dewclaws). Jidadka dhaadheer ayaa si tartiib ah hoos ugu soo dhacaya min garbaha ilaa qarka. Koodhka gaaban, jilicsan ayaa ku dhagan jidhka oo dhan wuxuuna ku yimaadaa hooska jiir-cawl illaa lacag-cawl, oo ku milmaya midabada madow ee jidhka iyo hooska fudud ee madaxa iyo dhegaha Waxay sidoo kale ku timaaddaa noocyo dhaadheer oo dhaadheer oo dhaadheer (FCI Group 7). Dhammaan midabada cawl waa la aqbalaa. Marmarka qaarkood xabadka ayaa lagu calaamadeeyaa.
Weimaraner waa faraxsan yahay, jecel yahay, caqli badan yahay, faraxsan yahay oo kalgacal badan. Way ku fiican tahay carruurta. Haddii aan la helin jimicsi sax ah waxay noqon doontaa mid cakiran oo adag in la xakameeyo. Noocani si dhakhso ah ayuu wax u bartaa laakiin wuu caajisi doonaa haddii tababbarku yahay wax isku mid ah marar badan. Noocani wuxuu ubaahan yahay shirkad leh, tababar khibrad leh oo ka bilaabata eey, oo leh milkiile fahamsan sida loo noqdo a Hogaamiyaha xirmada eeyga , ama waxay noqon kartaa madax adag oo kas ah. Haddii aan la helin hoggaan sax ah, waxay noqon kartaa mid lala dagaallamo eeyaha kale. Eygan ugaadhsiga ayaa leh dareen ugaarsi xoog leh oo yaan lagu aaminin wax yar xayawaan aan xashiish ahayn sida hamster , bakaylaha iyo doofaarka guinea . Bulsho sifiican dad, goobo, waxyaabo iyo xayawaan kaleba leh. Geesi, ilaalin iyo daacad, Weimaraner wuxuu sameeyaa waardiye iyo ilaaliye wanaagsan. Weimaraners gabi ahaanba waxay jecelyihiin hogaaminta. Waxay rabaan inay ogaadaan waxa laga filayo iyaga iyo muddada. Haddii tan aan si joogto ah loo caddayn, ma noqon doonaan kuwa deggan oo deggan, waxaa laga yaabaa inay culeys qabaan, oo laga yaabo inay yeeshaan walaac kala soocid ah, oo ay noqdaan kuwo wax dumiya oo aan xasilloonayn. Milkiilayaashu ma ahan inay noqdaan kuwo qallafsan, laakiin ku dejiya hawo dabiici ah oo amar ku leh hab-dhaqankooda. Waxyaabahaani waa kuwo dabiici ahaan muhiim u ah helitaanka farxad, dhaqmay , ey isku dheeli tiran. Sii Weim jimicsi ballaaran, ama wuxuu noqon doonaa mid aan degganayn oo aad u faraxsan. Sababtoo ah noocani wuxuu ka buuxo tamar, waxa ugu horeeya ee ay u baahan tahay inay barato ayaa ah fadhiiso . Tani way ku caawin doontaa ka bood bood , maaddaama kani yahay eey adag oo si lama filaan ah u garaaca dadka waayeelka ah ama carruurta. Noocani gaar ahaan waa inaan lagu dhufan anshax, maadaama ay si fudud uga taxaddaraan. Mar alla markay cabsi ka qabaan qof / shay, waxay eegaan inay iska ilaaliyaan tababarkuna waa adag yahay. Waxay aad u jecel yihiin inay ka farxiyaan oo ay dhiirrigeliyaan abaalmarin (cunno ama ammaan) in mar haddii xeelad la barto, eygu u boodi doono inuu ku celiyo ammaan. In kastoo, badanaa lagu qaldo inay yihiin carrab la ', maxaa yeelay waxay leeyihiin diiradda noocaas ah, haddii dhagarta ama codsashada milkiilaha aysan diiradda saarin waqtigaas, ma dhici doonto! Waqti badan la qaado socod-gaaban , adiga kugu xiga. Haddii loo daayo inuu horay u sii socdo Weimaraner wuxuu u jiidan doonaa sida tareenka oo wuxuu bilaabi doonaa inuu aamino inay tahay alfa, maadaama hogaamiyaha baakadka uu ugu horeeyo. Noocani wuxuu jecel yahay inuu ciyo, wuxuuna u baahan yahay in la saxo haddii uu noqdo mid xad dhaaf ah. Aad u adag, oo leh ur wanaagsan, iyo shaqaale jecel, Weimaraner ayaa loo isticmaali karaa dhammaan noocyada ugaadhsiga.
Miisaanka: Ragga 55 - 70 rodol (25 - 32 kg) Dumarka 50 - 65 rodol (23 - 29 kg)
Nooc u eg waxaa fiican inaad siiso iyaga laba ama saddex jeer oo yaryar maalintii halkii aad ka siin lahayd hal cunto oo weyn. Sidoo kale waxay u nuglaan kartaa dysplasia sinta iyo hypertropic osteodystrophy (koritaan deg deg ah oo xad dhaaf ah). Sidoo kale u nugul burooyinka unugyada .
Weimaraners kuma fiicnaan doonaan aqalka dhexdiisa haddii si ku filan loo jimicsado. Iyagu gudaha waxoogaa kama hawl galaan waxayna ku fiicnaan doonaan ugu yaraan daarad weyn. Kuma haboona nolosha qollada bannaanka.
Kuwani waa eeyo shaqeynaya oo xoog leh oo leh awood weyn. Waxay u baahan yihiin in loo qaado a maalin kasta, socod dheer ama orod. Intaas waxaa sii dheer, waxay u baahan yihiin fursado badan oo ay si xor ah ku ordi karaan. Ha jimicsi jimicsi kadib cuntada. Waxaa ugufiican in la quudiyo eey socod dheer kadib, isla marka uu qaboobo.
Jaakadda jilicsan ee gaaban, ayaa si fudud loo ilaalin karaa xaaladdeeda ugu sarraysa. Ku caday burush adag, iyo shaambo marmar qalaji. Ku maydh saabuun khafiif ah oo keliya markii loo baahdo. Is xoqin leh jahwareer ayaa ka dhigi doonta jaakad dhalaalaysa. Ka fiiri cagaha iyo afka waxyeellada ka dib fadhiyada shaqada ama jimicsiga. Ciddiyaha ha la jaro. Noocani waa celcelis daadiya.
Noocani waa dhowr qarniyo jir, waxaa laga soo qaatay isla xulasho la mid ah noocyada kale ee ugaarsiga Jarmal waana farac ka mid ah Dhiigbax . Weimaraner waa eey ugaarsi ugaarsan oo dhan iyo tilmaam fiican. Waxaa markii hore loo isticmaali jiray ugaarsi-kulan weyn oo loogu talagalay orso, deero iyo yeey, laakiin waxaa loo isticmaalaa maanta in badan oo ka mid ah shimbiraha iyo xitaa biyo-celinta. Weimaraner ayaa ka soo muuqday sawir gacmeedka Van Dyck bilowgii 1600s. Howard Knight, oo aasaasay naadigii ugu horreeyay ee Mareykan Weimaraner ah, ayaa eeyaha u soo dhoofiyay Mareykanka sanadkii 1929. Bandhigga caanka ah ee carruurta ee TV-ga Sesame Street ayaa caan ku ahaa inuu ku ciyaaro farsamooyin noocyadan ah oo ku labisan dharka dadka. Weimaraner waxaa markiisii ​​ugu horeysay aqoonsaday xisbiga AKC sanadkii 1943. Qaar ka mid ah hibooyinkiisa waxaa ka mid ah: ugaadhsiga, daba galka, soo celinta, tilmaamida, ilaaliyaha, ilaalinta, shaqada booliska, u adeegida dadka naafada ah, goobid iyo samatabbixin iyo xamaasad.
Gianni the Weimaraner oo ah eey yar oo 3 bilood jir ah oo ul ku cunaya
'Panu zum Laubwald waa weimaraner timo dhaadheer leh oo uu soo saaray Dr. Hans Schmidt oo reer Jarmal ah. Waxaan ugu yeeraa Piezl sababtoo ah xarfaantiisa, PZL. '
Peyton May the Weimaraner sida eey
Bodie the Weimaraner da'da 3 1/2 sano— 'Bodie waa 3-sano jir Weimaraner ah. Isagu waa mid aad u macaan, haddana aad u ilaaliya. Waa wiil fir fircoon oo jecel inuu ordo oo kubad ciyaaro. Isagu waa eey firfircoon oo weyn. Aad buu u caqli badan yahay. Wuxuu mar uun ka kacay miiska dushiisa oo wuxuu furay sanduuqa 'Pop Tarts box' oo wuxuu furay furayaasha sida aadanaha oo kale. Ma dhahayo taasi way fiicantahay, laakiin taasi waa caqli. Wuxuu kaloo jecel yahay inuu sariirta ila seexdo. Marka uusan seexanayn banaanka ayuu joogaa. Wuxuu jecel yahay inuu wax cuno sidoo kale. Waxaan soo saaray baaquli oo wuu cunaa si dhakhso leh. Isagu waa cayayaan jacayl iyo saaxiib weyn. '
Bodie the Weimaraner da'da 3 1/2
Bodie the Weimaraner sida eey
dibiga mastiff isku dhafka ah eeyo
Otto the Weimaraner oo ah eey yar 6 bilood
Ku wareeji Weimaraner sida eey yar oo jira 7 bilood
Eeg tusaalooyin badan oo Weimaraner ah
Sawirada Weimaraner 1
Weimaraner Sawirada 2
Sawirada Weimaraner 3
Weimaraner Sawirada 4
Weimaraner Sawirada 5
bulldog jack russell terrier mix
cajun eey squirrel ah oo iib ah
Terre galbeed galbeed iyo isku darka poodle